Agbanwe Agbanwe na B2B Ọdịnaya Marketing (yana Statistics) | Martech Zone
Ndi otu Economist emeela nyocha nke oma na nyocha banyere omume B2B wee meputa ihe omuma a na nsonaazụ ya. Na ajụjụ ọ bụla, enwere ndị ahịa azụmaahịa na ọgbọ na-esote ndị na-azụ ahịa. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ọdịiche dị ukwuu n'etiti ha abụọ.
N'ịtụleghachi ọdịiche, enwere ụfọdụ esemokwu na-adọrọ adọrọ
Ndị na-azụ ahịa azụmaahịa na-achọta akụkọ nyocha ihe na-enye aka site na 35% buru ibu!
Ndị na-azụ ahịa azụmaahịa, site na 26%, na-etinye opekata mpe awa anọ kwa izu ọdịnaya azụmahịa.
Ndị na-azụ ahịa azụmaahịa bụ 25% nwere ike ịchọta whitepapers aka karịa.
Ndị na-ahụ maka azụmaahịa azụmaahịa nwere 23% karịa ka agbanyụrụ site na ọdịnaya nke na-ada ka a Ahịa ahịa.
Business lagoro ezumike nka bụ 22% ọzọ yiri ka amasị mmasị ọdịnaya n'ụdị isiokwu.
Ikekwe ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ndị na-eto eto na-eto eto nwere mmasị na vidiyo (site na 9%) karịa nkezi ndị ahịa azụmaahịa. Nke a bụ ọbụna ihe akaebe nke usoro dị iche iche na-enweghị njedebe nke ndị ahịa na-ama aka.
Pịa Mepee Full Size
Tags: b2bb2b ọdịnayandị agha azụmaahịacontent Marketingndị na-eto eto na-azụ ahịa